तपाईंको २०० Marketing मार्केटिंग रणनीति | मा प्रेस विज्ञप्ति राख्नुहोस् Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 29, 2009 Douglas Karr
राम्रो साथी लोरेन बल, जो एक रन इंडियानापोलिस मार्केटिंग एजेन्सी राउन्डपेग भनिन्छ, मसँग ग्राहकहरु को एक जोडी मा गत वर्ष मा काम गरीरहेको छ। लोरेनबाट सिकेको मेरो एउटा पाठ भनेको प्रेस विज्ञप्ति अझै प्राप्त गर्ने अविश्वसनीय पहुँच हो। यो आश्चर्यजनक छ कि कतिवटा आउटलेटहरू रिलिजहरू पुन: प्रकाशित गर्दछन् - र कति अन्त्यमा ब्लगमा जान्छन्। यो ब्याकलिinking्क, अधिकार, र तपाइँको कम्पनी मा शब्द बाहिर प्राप्त गर्न को लागी ठूलो हुन सक्छ।
सायद सब भन्दा उल्लेखनीय यो हो कि तपाईंले ठूलो कम्पनीमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नको लागि कम्पनीमा पर्खनु पर्दैन। केहि वेबिनार घोषणा को रूप मा केहि साधारण या एक नयाँ केस स्टडी महान सामग्री हो! तपाईंको २०० Marketing मार्केटि strategy रणनीतिमा प्रेस विज्ञप्तिलाई छुट नदिनुहोस्। मा स्कट ह्विटलक को लागी धन्यवाद फ्लेक्सवेयर इनोवेशन, एक निर्माण टेक्नोलोजी कम्पनी। स्कटले मलाई PR सिफारिशहरूको बारेमा सोधेको नोट ड्रप गरें जुन मैले पहिले सिफारिस गरेको थिएँ र मैले महसुस गरे कि यसले एक उत्कृष्ट ब्लग पोष्ट बनाउनेछ।
ती आउटलेटहरू हुन् PRWeb र PRLeap यदि तपाईं यो गरिरहनु भएको आफैमा मार्केटर हुनुहुन्छ। प्रेस विज्ञप्ति लेख्नु भनेको एक कलाको रूप हो यदि तपाईं साच्चै उनीहरूलाई खुट्टा बनाउन चाहनुहुन्छ भने। यदि तपाईंलाई त्यहाँ मद्दत चाहिएको छ भने लोरेनलाई कल गर्नुहोस्!
टैग: कोकाकोलारूपान्तरित दरe-खुदराकेर्न
लिङ्क र नोट डग को लागी धन्यवाद। हामी यस वर्ष अनलाइन मार्केटिङको हाम्रो प्रयोगलाई बढाउँदैछौं। मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको मद्दत अविश्वसनीय भएको छ!
लिङ्कको लागि धन्यवाद.. ठीक छ, त्यसोभए मैले यसलाई कसरी मिस गरें? चक्कामै सुतेको हुनुपर्छ । राम्रो भिडियो पनि!